MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA PAPITESE IYO SAWIRADA - EEYAHA
Papillon / eeyaha ey isku dhafan yihiin ee loo yaqaan 'Papillon / Maltese'
Shayla the Papitese (eeyaha isku dhafan ee Papillon / Maltese) oo buuxa oo jira 1 sano jir— 'Aabaheed waa Maltese saa'id ah hooyadeedna waa dad nadiif ah oo Papillion ah.'
Papitese-ka maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Balanbaalis iyo Malta . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay cawsduur inay soo baxaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Papitese
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Kaynta = Papitese
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Papitese
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Papitese
Gracie Papitese sida eey yar oo 5 bilood jir ah— 'Gracie waa saaxiibka ugu macaan abid. Si kastaba ha noqotee, waqti ka waqti waxay noqon kartaa wax yar oo qurux badan. Waxay dalbado xoogaa waqti ciyaar ah milkiilaheeda iyo bisad diidan. Shakhsiyaddeeda ayaa dhalaalaysa oo aad u firfircoon. Waxay gabi ahaanba jeceshahay qof walba waana wax yar oo xishood leh eeyaha waaweyn. Wax badan ma ciyeyso, laakiin waxay ogeysiin doontaa milkiilaheeda haddii qof albaabka joogo ama haddii ay maqasho wax laga shakiyo. Dhogorteedu way madoobaatay markay yarayd oo way sii caddaatay markii ay sii weynaatay. Waxay u tagtaa ninka hagaajiya 6dii toddobaadba mar. Haddii dhogorta ay dheer tahay, waxay u baahan tahay in la xoqdo maxaa yeelay way waabariisan kartaa. Markii ay ahayd hal sano jir, ugu dambayntiina dhaguhu waxay go’aansadeen inay hoos u sii socdaan. Si kastaba ha noqotee, way kacaan waqti ka waqti, taas oo kaliya ku dareysa shakhsiyadeeda. Iyadu way caqli badan tahay, laakiin waxay noqon kartaa a wax yar madax adag . Tababarka dheriga xoogaa ayuu qaatay. Indhaheeda ayaa ooyaya sidaa darteed waxaan u adeegsanaa Indhaha Malaa'igta inay ka caawiso nadaafadda wajigeeda. Iyadu waa dhunkade / leefleef mana u muuqan karno inaan ka jebin karno taas. Guud ahaan, waanu jecel nahay iyada oo iyadu waa qayb ka mid ah qoyska! Aabaheed wuxuu ahaa Papitese hooyadeedna waxay ahayd AKC Maltese dhiig buuxa. '
Misfit u yeel cunugga Papitese markuu jiro 12 toddobaad jir— Waxaan ka helay eeygay xayeysiin ah. Haweeney ayaa ceshan kari weyday. Hagaag, waxaan fiiriyay hal sawir oo waxaan ogahay inuu tayda yahay! Wuxuu sameyn lahaa eyga daaweynta ugu fiican maalin uun, waan sheegi karaa. Tan iyo markii uu keenay gurigiisa, wuxuu ahaa mid aad u fudud tababarka. Wuxuu la jaan qaadayaa 2 eeydayda kale iyo dhammaan carruurta xaafadda. Xitaa wuxuu jecel yahay bisadaha. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro, inkasta oo aan wali ka shaqeyno guntin . Fasalka eeygu wuxuu ka mid yahay ardayda ugu sareysa. Aad baan u jeclahay isaga! Intii uu ku jiray dhabteyda aniga oo i jecel, wax fikrad ah kama haysto sida uu u jilicsan yahay iyo waxa uu ula dhaqmi doono kuwa badan oo kale. Waan ogahay inuu isbedel sameyn doono. :) '
Soo jiido eeyaha Papitese ee jira 4 bilood jir— 'Ninkan yari waa nin weyn! Isagu waa mid aad u jilicsan oo hubaal ah inuu ku habboon yahay biilka sida eeyga dhabta ah, laakiin sidoo kale wuxuu noqon karaa mid firfircoon oo ciyaar badan! Wuu ku fiican yahay carruurta iyo xayawaanka kale. Aad baan ula dhacay shakhsiyadiisa! Waa qof caqli badan oo fudud. Wuxuu umuuqday mid dheriga lagu tababaray laga soo bilaabo waqtigii aan gurigii keenay. Runtii si fiican ayuu ula qabsaday madow Shaybaar iyo Dahab dahab ah ! '
'Tani waa Dheeman. Iyadu waa 1-jir Papitese ah. Waa gabar caqli badan, macaan badan. Waxay jeceshahay inay korto xayndaabka markay tahay saaxiib kitty waa dhinaca kale.
Shayla the Papitese (Papillon / Maltese mix) oo ay weheliyaan asxaabteeda da 'ahaan waa 3 todobaad (oo ka muuqda kor buuxa)
Shayla the Papitese (Papillon / Maltese mix) eey yar oo ah 4 toddobaad jir (oo lagu muujiyey kor kor buuxa)
Bentley labka Maltillon (sidoo kale loo yaqaan Papitese) eey yar oo jira 5 bilood iyo 4.5 rodol — hooyadu waa AKC Maltese aabuhuna waa AKC Papillon. Bentley wuxuu ka yimid isla qashinka Mollie, hoos ka muuqda.
Mollie dheddigga Maltillon (sidoo kale loo yaqaan Papitese) eey yar oo jirta 5 bilood jir iyo 4.5 rodol — hooyadu waa AKC Maltese aabuhuna waa AKC Papillon. Mollie wuxuu ka yimid isla qashinka sida Bentley, kor ka muuqda.
Sophie oo 6-isbuuc jir ah Papitese ... ama Maltillon, sida uu u yaqaan 'breeder' iyada (Papillon / Maltese mix) eeyo
rumaanka iyo iskujirka 'pincher' yar yar
shaqaalaha americanordordshire terrier shar pei mix
2 bilood jir Territori
noocyada kala duwan eeyaha feeryahan